Liverpool oo Si Xun ugu Bahdishay Arsenal garoonkooda Anfield…+SAWIRRO – Gool FM
Liverpool oo Si Xun ugu Bahdishay Arsenal garoonkooda Anfield…+SAWIRRO
( Premier League ) 29 Dis 2018. Liverpool ayaa guul raaxo ah ka gaartay Arsenal markii ay ku xasuuqeen 5-1 kulan xiiso leh oo ku dhexmaray Anfield.
Dheesha ayaa qeybta hore lagu kala maray 4-1, waxaana hogaanka cayaarta qabatay Arsenal oo uu goola daah furka u dhaliyay Ainsley Maitland-Niles daqiiqadii 11-aad kaddib diib usoo dhigay Alex Iwobi.
Laakiin laba daqiiqo kaddib Roberto Firmino ayaa goolka bareejada u dhaliyay Ka hor inta uu 90-ilbiriqsi kaddib hogaanka u dhiibin kooxdiisa Liverpool kaddib kubbad uu si cajiiba u dhaafay daafaca Arsenal.
Sadio Mane ayaa goolka seddaxaad u dhaliyay Reds kaddib caawin uu ka helay Maxamed Salah.
Balse daqiiqadii u dambeysa qeybta hore Maxamed salax ayaa rigoore ku dhaliyay goolka afaraad kaddib qalad isaga lagu galay.
Dib markii loogu soo laabtay kaambiyaha labaad Liverpool ayaa sii wadatay duulaakeenda ka dhan ah Gunners waxaana dhacday iney la yimaadeen goolkii shanaad ee kulanka waxaana rigoore ku dhaliyay Roberto Firmino taasoo dhameystirtay seddaxdleydiisa kulanka.
Reds ayaa sii kordhisay hogaanka Premier League waxayna lee yihiin 54-dhibcood iyagoo 9-dhibcood ka horreeya Tottenham oo qasaaro kala kulantay Wolves halka City oo loolan xoogan uu kala dhaxeeyo ay ka horeeyaan 10-dhibcood inkastoo labada naadi ay balansan yihiin dheesha seddaxaad ee ugu dambeysa Boxing Day maalinka khamiista.
"Qof walba ee ku sugan Manchester City diyaar ayuu u yahay kulanka beri” - Guardiola
Ka Bogo RIKOODHADA CAJIIBKA ah ee laga diiwaan galiyay kulankii ay Liverpool CASHARKA lama ilaawaanka ah u dhigtay Arsenal